Wasiirka arrimaha gudaha “Dowladdu waxey dadaal ugu jirtaa meel marinta hiigsiga 2016-ka” – Radio Muqdisho
Wasiirka arrimaha gudaha “Dowladdu waxey dadaal ugu jirtaa meel marinta hiigsiga 2016-ka”
Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen oo marti ku ah barnaamijka kulanka todobaadka si toos ahna u fadhiya Studiyaha Idaacadda Radio Muqdisho iyo Telefishinka Qaranka ayaa ka hadlay marxaladda siyaasadeed ee dalku marayo, iyo howlaha shaqo ee horyaala wasaaraddiisa iyo jaangoynta hiigsiga 2016-ka.
Wasiirka ayaa tilmaamay in waqtigu koobanyahay laakiin ay dowladdu dadaal ballaaran ugu jirto sidii ay u meel marin laheyd qorshaha hiigsiga 2016-ka si dalka loo gaarsiiyo doorasho madax banaan.
Sidoo kale wasiirka ayaa soo hadalqaaday dhameystirka dhismaha maamullada dalka iyo kuwa iminka howshoodu socoto sida Galgaduud iyo mudug iyo dhinaca Hiiraan iyo Sh/dhexe oo uu tilmaamay in qorshuhu yahay in howshooda la soo gebagebeeyo bisha Juun ee inagu soo aaddan.
Dhinaca kale wasiirka ayaa ka hadlay diyaarinta shuruucda axsaabta dalka, isagoo tilmaamay ineey meel wanaagsan mareyso howshaasi, waxuuna hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay meel marinta shuruucdaasi si looga gudbo nidaamka qabiilka looguna xuub siibto hanaanka xisbiyada dalka.
Wasiirka ayaa haatan si toos ah u fadhiya Studiyaha Idaacada Radio Muqdisho iyo Telefishinka Qaranka, isagoo ka jawaabaya su’aalo ay dhageystayaashu ku soo weydiinayaan qadka telefoonka.
Barnaamijka Kulanka Todobaadka oo uu marti ku ahaa wasiirka arrimaha gudaha “Dhageyso+Sawirro”
Barnaamijka Kulanka Todobaadka oo uu marti ku ahaa wasiirka arrimaha gudaha "Dhageyso+Sawirro"